Izihlahla zesimanje zikaKhisimusi ezihlotshaniswayo nezihlobiso zazo
Ngendlela yokuNyaka Omusha, kanye nomqondo wokunqoba, ukunakekelwa kuza ngokuthola izimfanelo eziyinhloko zeholide. Abakhiqizi banikeza izinhlobo eziningi zemithi yamafriji yokufakelwa, okungafani nokuphakama nombala.
Izihlahla zesimanje zikaKhisimusi ezenziwe ngokulula zilula ukuyisebenzisa futhi zibukeka zinhle kakhulu kunezo ezinqunywe ehlathini. Ziyi-hypoallergenic, ngoba zenziwe ngezinto zokwakheka kwemvelo. I-spruce yokufakelwa inenzuzo, ngoba ayishintshi futhi igcina ukubukeka okukhangayo phakathi nemikhosi Yonyaka Omusha. Ngaphezu kwalokho, uma uthenga i-spruce ephezulu yokukhiqiza, asikho isidingo sokuyithenga ngonyaka ozayo. Okokuqala, isihlahla sikaKhisimusi siboshelwe izigqoko. Isihlahla sikaKhisimusi izigqoko ezihlukahlukene zihlukahluka ngemingcele ethile: uhlobo, ubukhulu, inani lezici ezikhanyayo kanye nemodi ekhanyayo. Ezinye izigqoko zixhuma kwinethiwekhi ngqo futhi zishisa, kuyilapho abanye bethola amandla kusuka emanzini nge-adapter, okuyinto ephephile kodwa encane kakhulu.
Khona-ke isihlahla sikaKhisimusi sigqoke imihlobiso emikhulu futhi emangalisayo kanye namathoyizi - amabhola anokwakhiwa, ama-glass icicles, zonke izinhlobo zezibalo. Amabhola anamuhla kaKhisimusi akhiwa kokubili ingilazi kanye nezinto ezikhethekile, ngenxa yokuthi zinamandla futhi zikhonza isikhathi eside kunokushaya. Ukuze unike ubukhazikhazi nobuhle kumhlobiso wesihlahla sikaKhisimusi, lezi zibhola ziboshwe ngamathebulethi amhlophe emagatsheni omuthi, uma befisa, ukuhlobisa i-riboni ngomnsalo. Imibala yemikhosi yendabuko - igolide nebomvu elibomvu, kanye nesibhakabhaka, isiliva, ushokoledi. Izinhlobo zezinto ezihlukahlukene zikhulu, zitholakala kuqoqo noma kukhophi eyodwa. Nansi umthetho oyinhloko ocatshangelwayo lapho uhlobisa umuthi kaKhisimusi: kusukela phezulu kuze kube phansi ubukhulu bezithoyizi banda, ngaleyo ndlela kudala ukubonakala okubonakalayo, ukuvuleka komuthi ogqoke.
Amathoyizi abonakala kakhulu atholakale eceleni kwegranti elikhazimulayo, elidala umdlalo wokukhanya futhi uthuthukise imimoya yemilingo. Emva kwalokho, umuthi kaKhisimusi uhlotshiswe ngamathoyizi amancane. Isibonelo, izibalo ezincane zezingelosi, abalingiswa bezinganekwane, izilwane ezihlukahlukene, iSanta Claus ne-Snow Maiden. I-Tinsel iyimfanelo ephelele yokugqoka kwesihlahla sonyaka omusha. Abakhiqizi bakhiqiza ama-tinsel e-fluffy of imibala engalingani nemibala yamabala. Ngaphezu kwalokho, lihlukile ekucabangeni, ubude nobubanzi. I-Tinsel eyenziwe yendaba ehlala njalo, enobungozi futhi ephephile iye yasungulwa, ngakho-ke ifaneleka ukusetshenziswa kwesikhathi eside. Khumbula imvula enamandla, egelezayo, ama-snowflakes aqhakazayo futhi ahlume, ama-asterisk bendabuko, ama-cones nama-crystals, uhlobo oluhlukile, ivolumu nombala. Futhi-ke, ukuthinta kokugcina ekuhlobiseni ubuhle boNyaka Omusha kuhlobisa phezulu kwesihlahla ngenkanyezi noma ngokuphefumula.
Imiqhele ethi "Snowflake" ne "Star" namuhla imihlobiso ethandwayo ikakhulukazi yezihlahla ze-fir zokwenza izinto. Ezinye izitshalo zeKhisimusi zinezici ezakhiwe ngaphakathi kwe-LED, ezibenza bakwazi ukukhanya ngokulinganayo nangokwengeziwe. Ukuthembeka kwabo nokulula okusebenzayo kuqinisekisa ukuthi izinga eliphezulu nelisebenza isikhathi eside. Muva nje, imihlobiso eminingi yesimiso sikaKhisimusi yanamuhla iye yagcwaliswa ngezingoma zanamuhla, kuhlanganise neqhwa lokufakelwa. Ukusuka kuyo wenze ama-drifts amancane, uwahlakaze emagatsheni ase-spruce. Iqhwa lokufakelwa lihlobisa i-windows sills nezibuko; ngakho yonke indlu, indlu, iguqulwa njengenganekwane. Umhlobiso wesihlahla sonyaka omusha awugcini nje kuphela ukugcinwa kwesiko, kodwa futhi nokwenziwa komuntu okuphakade okulindelekile konyaka omusha ozayo. Kucatshangwa ukuthi: ukuthi ucebile kangakanani futhi umkhiqizo kaKhisimusi ususwe, unyaka wonke ozayo uba uphumelele kakhulu.
Ungasusa kanjani iphunga likagwayi endlini?
Iseluleko sengqondo sabashadile
Indlela yokonga isikhumba izinto
Izindlela zokupheka ezingcono kakhulu ze-sauce ezinomsoco wezinhlanzi, inkukhu nezinye izidlo
Lapho uchitha khona inhlanhla - amathiphu awusizo nemibono
Ukuphikisana kuka-Elsa Schiaparelli noCoco Chanel
I-whitening toothpaste: izinhlobo, ukuphumelela, ukuphikisana
Siyakuhalalisela ngoSuku luka-Valentine sika-2017 isoka lakho othandekayo, indoda, indoda, umngane, intombazane ethandekayo - amavesi amfushane, ama-prose kanye nama-valentines amahle kakhulu ngo-February 14 kubo bonke abangane
Vegetarianism, ukudla okunembile kwezakhi
Izinhlobonhlobo zezimbali ezivela ezimbali zensimu
I-LCN Natural Care System: izinyathelo ezine ezipikili ezinempilo
Kusho futhi ukugqoka izinwele ezomile ezingenayo
Yini amadoda engayithandi kwabesifazane?
Amakhokhethi - amathambo amathrendi
Ukubuyekeza kwefilimu "I-X-Files: Ngifuna Ukukholelwa"
Izipho ezingavamile zendoda